ဒူး၏ဒဏ်ရာ - ဒူးဒဏ်ရာနှင့်မည်သို့တစ်ဦးဒဏ်ရာရပြီးနောက်ဒူးကုသပေးဖို့ဘာတွေလုပ်နေလဲ?
မည်သည့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုချက်ချင်းလိုအပ်သောပထမဦးဆုံးအကူအညီပေးတစ်ဦးကိုချက်ချင်းအထူးကုနှင့်တိုင်ပင်ရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်လျှင်။ အထူးသဖြင့်အခါဒူးအဆစ်များ၏ဒဏ်ရာ။ ဒဏ်ရာလမ်းပေါ်မှာကြီးနှင့်လူကိုယ့်ကိုယ်အားဖြင့်မသွားနိုင်လျှင်သင်လျင်မြန်စွာလူနာတင်ကားခေါ်ပါဖို့လိုပါတယ်။
ဒူးဒဏ်ရာ - လက္ခဏာများ
အချိန်မီထုံးစံ၌ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုကူညီပေးဖို့, တကဒူးဒဏ်ရာဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ဘယ်လိုသိရန်အရေးကြီးပါသည်။ အဓိကရောဂါလက္ခဏာတွေများထဲတွင်:
တစ်ဦးကအနာ - လူနာဧရိယာ၏အသားအရေများနေတဲ့ချွန်ထက်နာကျင်မှု, တစ်ခါတစ်ရံမခံနိုင်သော, Discoloration အရောင်, သွေးလွန်ပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းရောင်ဖုံးလွှမ်း။
ဘယ်အချိန်မှာရွတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု - ပူးတွဲ mobility ပြဿနာများ, ဘေးဒဏ်သင့်ခြေထောက်အပေါ်မှီခိုဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်အတူနာကျင်မှု, စိတ်ထိခိုက်အတူပောက်သံ, သွေး, အဆစ်ပျော့ပျောင်းသောတစ်သျှူးရောင်ရမ်းခြင်း။
အဆိုပါ menisci မှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု - တစ်ဦးချွန်ထက်နာကျင်မှု, အထူးသဖြင့်ခှနျအားစိုကျထုကာလအတွင်းလှေကားများ၏တက်သို့မဟုတ်နွယ်ဖွားစဉ်အတွင်းအခက်အခဲများ, အသေးစားကျုံ့၏တစ်ဦးပိုလျှံ "ကိုနှိပ်လိုက်ရင်" ၏လက္ခဏာ ပူးတွဲအတွက်အရည် ပူးတွဲတိုးမြှင့်, အပူချိန်ပြုစုပျိုးထောင်။
ဒူးဒဏ်ရာများ - အမျိုးအစားများ
ခေတ်သစ်ဆေးပညာတွင်အဓိကပူးတွဲဒဏ်ရာမျှခွဲခြားရှိသေး၏။ အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကစူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်ဒဏ်ရာအကြားခွဲခြားရန်။ လူတိုင်းမတစ်ဦးဒူးဒဏ်ရာဖြစ်ပျက်သောအရာကိုသိတော်မူ၏။ ထိုသို့သောအမျိုးအစားသူတို့၏ဝေစုကိုလက်ခံ:
meniscus, patella, quadriceps ၏ကွဲပြားခြားနားသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု;
အနာအစက်အပြောက်အအေးမှပူးတွဲ။ ကြောင့်ဤကပူးတွဲလိုင်သို့ပြည်တွင်းရေးသွေးထွက်၏သေးငယ်အတိုင်းအတာစေရန်တတ်နိုင်သမျှဖြစ်လိမ့်မည်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလမ်းပေါ်မှာဒဏ်ရာရနှင့်မသူ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လမ်းလျှောက်ဖို့နိုင်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်လျှင်, သင်ချက်ချင်းလူနာတင်ကားခေါ်ပါဖို့လိုပါတယ်။
ကုန်းပေါ်ခြေလက်ကို ထား. - ဒါကြောင့်သင်ကခြေလက်အင်္ဂါမှသွေးစီးဆင်းမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
ပြင်းထန်သောနာကျင်မှုရှိလျှင်သင်ကိုသုံးနိုင်သည် ကိုက်အခဲပျောက်ဆေး - analgin, Ibuprofen, keterol ။
ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့တစ်ဖိအားပတ်တီးသက်ဆိုင်ပါသည်။ ထည်လုပ်နိုင်တဲ့တစ်ခုသို့မဟုတ်ပတ်တီး Apply ။ ဒါဟာကောင်းသောပူးတွဲ secure နှင့်လူတစ်ဦးအဆင်ပြေခဲ့ကြောင်းသေချာစေရန်အရေးကြီးပါသည်။
တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန် recover နိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်ဒူးဒဏ်ရာနှင့်အတူဘာလုပ်ရမှန်းသိရန်အရေးကြီးပါသည်။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏ဤအမျိုးအစားကုသမှုမှာတော့ရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်:
ကိုက်အခဲပျောက်ဆေး Apply ။ ဆရာဝန်များမကြာခဏသတ်မှတ် Non-တီးရွိုက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ နှင့်ဆီ။
ပြင်းထန်သောနာကျင်မှုဖြင့်လိုက်ပါသွားကြောင်းတစ်ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ရောင်ရမ်းခြင်းရှိခဲ့သည်ဆိုပါကပူးတွဲထိုးဖေါက်ခြင်း site ကိုလုပ်ဆောင်ရပါမည်။
physiotherapy Apply ။
တစ်ဦးဒူးအဆစ်ဒဏ်ရာရကွဲပြားခြားနားသောဆီနှင့် gels ဖြစ်စဉ်းစားသည်အတိုင်းဤနာမကျန်းနှင့်အတူထိရောက်သော။ နာကျင်အာရုံနှငျ့ဆကျဆံရာတှငျသူတို့ရဲ့ထိရောက်မှုကိုသူ့ဟာသူအပေါ်အများအပြားသားကောင်များစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဒဏ်ရာပြီးနောက်ဒူးအတွက်နာကျင်မှုများအတွက်ထိပ်လူကြိုက်အများဆုံးဤဆီမွှေး:
ပူးတွဲဒဏ်ရာနီးပါးအမြဲပြင်းထန်နာကျင်မှုဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ ဒူးဒဏ်ရာ "Traumeel" နှင့်အတူထိရောက်သော gels များထဲတွင်။ မည်သည့်ဒူးဒဏ်ရာဆရာဝန်များကမကြာခဏသတ်မှတ်ပါလျှင်အမျိုးမျိုးသော Non-တီးရွိုက်မူးယစ်ဆေးဝါးများခံစားခဲ့ရသည်။ သူတို့တွင်နေသောခေါင်းစဉ်:
မကြာခဏဒူးဒဏ်ရာ Compression နှင့်အတူကူညီပေးသည်။ အများအပြားထိရောက်သောလူကြိုက်များချက်ပြုတ်နည်းများရှိပါတယ်။
ရေနံ (ဟင်းသီးဟင်းရွက်) - 1 tbsp ။ ဌ။
ပြုတ်ရေ - 1 tbsp ။ ဌ။
ရှာလကာရည် - 1 tbsp
ပျက်စီးနေသောဧရိယာမှလျှောက်ထားခြင်းနှင့် cellophane တစ်ဦးနွေးအထည်တွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။
ဂေါ်ဖီထုပ်အရွက် -2PCs ။
သူတို့ကသီးဖျော်ရည်မှီတိုငျအောငျခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေပြည်နယ်မှသူတို့ကိုနှိပ်စက်ဖို့ကိုလှိမ့ pin ကို၏အကူအညီနှင့်အတူ။
အာလူး - 1 pc; ။
ရေ 0.5 v ။ ;
ကောက်ခြင်းနှင့်အဖြူမုန့်ညက် - 100 ဂရမ်
ဒဏ်ရာပြီးနောက်ဒူးကုသပေးဖို့ဘယ်လောက်၏မေးခွန်းကိုတွင်များစွာသောကျွမ်းကျင်သူများက physiotherapy လျှောက်ထားရန်အကြံပြုသည်။ ဒီနည်းလမ်းကိုအတူက anti-inflammatory အကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Physiotherapy ၏ရောဂါအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်:
အဆိုပါ meniscus ပျက်စီးမှု;
ဒီနည်းလမ်းကိုနှင့်အတူသွေးလည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်အစာအာဟာရ articular တစ်ရှူးပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ထို့အပြင်ကြောင့်တစ်သျှူးပြုပြင်ယန္တရားများများ၏ဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်ကိုသက်ဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့သောလက္ခဏာများ acoustic လှိုင်းတံပိုးဖန်တီးသောပြည်တွင်းရေးသွေးခုန်နှုန်းအနှိပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးသောထိတ်လန့်-လှိုင်းကုထုံးရှိသည်။
သင်တစ်ဦးဒူးဒဏ်ရာရိုးရာကုစားဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုသိမထားဘူးဆိုရင်ကျနော်တို့အနည်းငယ်အလားအလာ options များဆက်ကပ်။
တစ်မျိုးကတော့ခုန် - 100 ဂရမ်။
ဗော့ဒ်ကာ - 400 ml ကို။
ရရှိလာတဲ့ဖြေရှင်းချက် filtered ခဲ့သည်။
ပူပြင်းတဲ့ compress အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။
coltsfoot - 20 ဂရမ်; ။
oregano - 20 ဂရမ်; ။
ဗော့ဒ်ကာ - 500 ဂရမ်
ဒူး၏ဒဏ်ရာ - အကျိုးဆက်များ
ဒူးဒဏ်ရာပြင်းထန်သောထိခိုက်ပျက်စီးမှု၏အဓိကကုသမှုဆရာဝန်တစ်ဦးကိုခနျ့အပျသငျ့သညျ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အများကြီးပြင်းထန်မှုအပေါ်မူတည်နှင့်ဘယ်လိုဒူးအရွတ်၏ဒဏ်ရာပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအထူးကုကြောင့်ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ကြာအချိန်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာမလုံလောက်ကုသသို့မဟုတ်စနစ်တကျ disinfected ဒူးဒဏ်ရာ RECURRENCE ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအကြောင်းကိုမှတ်မိဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ ထို့အပြင်ပူးတွဲ၏တိုးလာ sensitivity ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ရလဒ်အဖြစ်ဒူးအားလုံးအချိန်ကိုပင်အသေးစားခှနျအားစိုကျထုအဘို့, နာကျင်မှုများနှင့်အဆင်မပြေ၏ခံစားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အန္တရာယ်အကျိုးဆက်များ၏နောက်ထပ်တဦးတည်း - တည်ငြိမ်ရေး၏အရှုံးနှင့်၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတစ်ဦးကိုချိုးဖောက်။ ယင်းမော်တာ function ကိုမမှန်ချိုးဖောက်ခြိမ်းခြောက်နိုင်ပါသည်။ ခြေဆွံ့ - undertreated ဒဏ်ရာများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအကျိုးဆက်များတစ်ခုမှာ။ ဒူးဒဏ်ရာများ၏ဆိုးကျိုးများမှရှောင်ရှားရန်, ကအချိန်ပေါ်ကုသမှုကိုစတင်ပါနှင့်ဆရာဝန်တစ်ဦး၏အားလုံးလိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်နာရန်အရေးကြီးပါသည်။
ဒါဟာဒူးဒဏ်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးအတွက်အလွန်ထိရောက်သောစဉ်းစားသည်။ ဒါဟာအနိမ့်ခြေလက်အင်္ဂါအပေါ်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ဝန်ပိတ်ပင်ထားသင့်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ သငျသညျကီထိုင်နှင့်အတူစတင်နှင့်မည်သည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးဒဏ်ရာရပြီးနောက်ဒူး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစဉ်အတွင်းသင်စိတ်ရှည်ပြီးတိကျတဲ့အစီအစဉ်ကိုရုပ်ပျိုလေ့ကျင့်ရေးမှကပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အားလုံးလေ့ကျင့်ခန်းနေ့စဉ်ဖြစ်သင့် Perform ။
သာဒီအလမ်းအတွက်ကြောင့်အနေအထားကစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အနာဂတျမှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန်ခွင့်ပြုရသောဒူးအဆစ်, ပတ်လည်ရှိကြွက်သားစုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုချဉ်းကပ်၏ကြာချိန်ဆယ်မိနစ်ထက်မပိုသင့်ပါတယ်။ ဒီဒဏ်ရာနှင့်အတူတစ်ဦးဒူးအဖြစ်ပူးတွဲဒဏ်ရာပြန်လည်ထူထောင်ရေးမသင်မနေရဖြစ်သင့်သည်။ ဤတွင်လိုအပ်သောထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်နေကြသည် လေ့ကျင့်ခန်းန့ :
တစ်ဦးဒဏ်ရာရပြီးနောက်ဒူး upload လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
မကြာခဏလူတွေကိုဒဏ်ရာကနေသင့်ရဲ့ဒူးတို့ကိုခိုင်ခံ့စေဖို့ဘယ်လိုအံ့ဩပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အများကြီးအများဆုံးအသုံးဝင်ဒဏ်ရာ၏ပြန်လည်နာလန်ထူခြင်းနှင့်သဘာဝတရား၏စင်မြင့်ပေါ်တွင်မူတည်ပါလိမ့်မယ်, များစွာသောကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရ, ဤလေ့ကျင့်ခန်းနေသောခေါင်းစဉ်:
တစ်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတယောက်ခြေဖြင့် gluteal တံတား;
အဆိုပါ Simulator ကိုအတွက်အနိမ့်ခြေထောက်၏ flexion;
တုတ်နှင့်အတူ Nordic လျှောက်လှမ်းခြင်း - ထိုအသုံးဝင်သောနှင့်သင့်လျော်သော technique ကို
အစဉ်အလာနှင့်ရိုးရာဆေးပညာ၏အကူအညီဖြင့်အဆစ်အတွက်အကြပ်အတည်းဖယ်ရှားပစ်ရရန်မည်သို့ - အဆစ်အတွက်အကြပ်အတည်း
Staphylococcus Aureus မည်သို့ဖြစ်သနည်း
Goulash - စာရွက်
အဘယ်ကြောင့်ကလေးတစ်ဦး bends နှင့်နို့တိုက်ကျွေးမှုကာလအတွင်းငိုကြွေးသနည်း?
သုပ် "Marseille":4မူရင်းချက်ပြုတ် options များ
အဘယ်အရာကို 2015 ခုနှစ်ဆောင်းဦးအတွက်ဖက်ရှင်ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
ကိုယ်ဝန် 12 ပတ် - ultrasound စိစစ်
နွေဦးရာသီလိပ် - စာရွက်
ကလေးများအတွက် Colic - 1 လ
မှိုဟင်းချို - စာရွက်